I-China 36W Germicidal uv light disinfection home Umkhiqizi nomhlinzeki | Kanfur
1. Amapharamitha wesibani se-UV sokubulala amagciwane
Amandla: 36W / 60W
Umsebenzi: Isikhathi samagiya amathathu (15min, 30min, 60min), ukuqala kokubambezeleka nokulawula okukude okungenantambo.
Usayizi: 14 * 14 * 44 (CM)
2.Yini ubuchwepheshe be-UV?
Ukukhanya kwe-Ultra-Violet (UV) akubonakali emehlweni womuntu futhi kuhlukaniswe kwaba yi-UV-A, UV-B ne-UV-C.
I-UV-C itholakala ngaphakathi kwebanga elingu-100-280 nm. Egrafini kungabonakala ukuthi isenzo sokubulala amagciwane sikhuliswe ngama-265 nm ngokuncishiswa nhlangothi zombili. Izibani eziphansi ze-UV-C zinokukhishwa kwazo okuyinhloko ku-254 nm lapho isenzo se-DNA singama-85% wenani eliphakeme kanye no-80% ekhoneni le-IES. Ngenxa yalokhu, amalambu ethu okubulala amagciwane asebenza kakhulu ekwephuleni i-DNA yezinto ezincane eziphilayo. Lokhu kusho ukuthi azikwazi ukuphindaphinda futhi zibangele izifo4.
Ama-micro-organisms ukumelana okusebenzayo ekukhanyeni kwe-UV kuyahluka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, imvelo yesinambuzane esithile inomthelela omkhulu kumthamo wemisebe odingekayo ukuze ubhujiswe.
3.Ziyini izinzuzo zeLermicidal UV-C Lamp?
I-ozone ne-ozone mahhala, inikwe amandla okude
Ukukhanya kweGermicidal UVC kuvimbela amagciwane futhi kuhlanze umoya. Ukukhanya kwethu kwe-UVC futhi izibani eziningi ze-UVC nazo zikhipha i-ozone, ingabona inzalo nxazonke
Isibani se-UVC sibuye neremote engenantambo ukuze kube lula ukusetshenziswa nokuphepha.
Ukusebenza okwenziwa ngesandla kungakhethwa. Ngokuchofoza inkinobho, esiqongweni se-Apollo noma kude kude - amabhaktheriya, amagciwane, kanye nama-virus akasebenzi.
Mane ucindezele inkinobho yamandla noma usebenzise irimothi ebangeni eliphephile bese isibani seGermicidal UVC siqala ukuphazamisa i-DNA ne-RNA yamagciwane bese belahlekelwa amandla nokusebenza. Kulula ukuyisebenzisa, kunjengomlingo.
Langaphambilini 36W ephathekayo 254nm Ozone uvc disinfection lamp
Olandelayo: Ukukhanya okusha kwe-35W UV kwe-disinfection ukukhanya kwenzalo yasendlini
ukukhanya kwe-germicidal UV
i-UV light inzalo ephathekayo
isibani sokubulala amagciwane se-ultraviolet
UV magciwane isibani
UV isibani magciwane ekhaya
izibhedlela ze-UV light ze-disinfection
ukukhanya kwe-UV ultraviolet
36W / 60W UV magciwane isibani nge-wireless ...